ကျန်းမာကြံ့ခိုင်​တဲ့ခန္ဓာကိုယ်​မျိုးဖြစ်​​အောင်​ကြိုးစား​နေတဲ့ ​အေးမြတ်​သူ - Celepedia
by celeadmin July 17, 2020 July 17, 2020
မင်းသမီး​ချော​လေး​အေးမြတ်​သူက​တော့ အိမ်​မှာ​နေရင်းနဲ့ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်​ဖြစ်​​အောင်​ ကြိုးစား​နေတာပါ။ သူမရဲ့ ပရိသတ်​​တွေကအတွက်​ အခုလိုကိုဗစ်​ကာလမှာမကြာခဏ live လွင့်​ရင်းစကား​တွေ​ပြော​ပေး​လေ့ရှိ​ပေမယ့်​ မမြတ်​​လေးက ဒီရက်​ပိုင်းပရိတ်သတ်​​တွေအတွက်​ အချိန်​မ​ပေးနိုင်​ဘဲ စားချင်​တိုင်းစားပြီးကျန်းမာဖို့အတွက်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေကြိုးစားလုပ်​ကိုင်​လျက်​ရှိပါတယ်​။
“ဒီရက်ပိုင်း. မမမြတ်လေး. Live တွေမပြောဖြစ်.. ပုံတွေမတင်ဖြစ်ရသော အဓိကအကြောင်းအရင်း.ညအချိန်မတော် စားချင်တာတွေ စားနိုင်ရေး…ဘယ်လောက်စားစားဝမလာအောင် ကြိုးစားနေရပုံ .၊အမျိုးသား…/ အမျိုးသမီး မခွဲခြားဘဲ. လူသားတိုင်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်မှု လိုအပ်တယ်ရှင့်.​နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်မှာ လူတိုင်းကျန်းမာနေဖို့ ကြံ့ထိုင်နေဖို့ က အဓိက ဦးစားပေးဖြစ်သွားပါပြီ နော်။
ချစ်ရသူတွေအားလုံး. စိတ်ချမ်းသာ..ကိုယ်ကျန်းမာပါစေရှင့်​။ချစ်ရသူတွေအတွက် အမြင်မတော်တဲ့ ပုံစံတွေဖြစ်နေမယ်ဆို.. ကျန်းမာရေးအမြင်လေးနဲ့ မြင်ပေးပါနော်​”ဟူဆိုကာ မမြတ်​​လေးက သူမရဲ့ ​လေ့ကျင့်းခန်းလုပ်​​နေတဲ့ပုံ​တွေကိုပရိသတ်​​တွေကိုချပြထားပါတယ်​။သူကိုယ်​တိုင်​လည်း ကျန်းမာ​ရေးလိုက်​စားရင်​ပရိသတ်​​တွေကိုလည်း အတူတူလိုက်​ကြိုးစားဖို့ တိုက်​တွန်းထားတာဖြစ်​ပါတယ်​။celepedia ပရိတ်သတ်​​တွေအတွက်​ ​အေးမြတ်​သူရဲ့ပုံ​လေး​တွေကို​ဖော်​ပြလိုက်ပါတယ်​။
“ခင့် အလွမ်းတွေ မှာတမ်းချွေမယ် 💛”လို့ဆိုကာ သိမ်မွေ့နုညံ့တဲ့ အလှလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားခဲ့တဲ့ ခေးလေး
“ကြာပန်းလေးတွေ အလှဆုံးဖူးပွင့်နိုင်ဖို့ ရေလိုအပ်သလို အိန်ဂျယ့်ကို အတောက်ပဆုံးအမြင့်ပျံသန်းနိုင်ဖို့ Winge လေးတွေလိုအပ်တယ် 💖”လို့ဆိုလာတဲ့ အိန်ဂျယ်
“မော်”ပြီးတော့ “ဆောင်းလေး”အဖြစ် တွေ့ရတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝေလာရီ